Articles tagged 'harare youth league'
Gomwe challenges conviction 8 September 2015 HARARE - Ousted Zanu PF Harare youth league chairperson Godwin Gomwe has applied for permission to appeal against his conviction for criminal insult. Gomwe was sentenced to one month's imprisonment, which was wholly suspended on condition that he performs 70 hours community service at Budiriro...
Gomwe convicted of criminal insult 2 September 2015 HARARE - Ousted Zanu PF Harare youth league chairperson Godwin Gomwe was yesterday convicted on two counts of insulting fellow party members using grossly-offensive speech. Presiding magistrate Takunda Mutetwa found Gomwe guilty of criminal insult and contravening section 88 (c) of the Post an...
Alleged Gomwe accomplice in court 16 June 2015 HARARE - Another Zanu PF Harare youth league official appeared in court yesterday on allegations of extorting $46 200 from home-seekers using First Lady Grace Mugabe's name. Moses Handiseni, Zanu PF Glen Norah district political commissar, was granted $500 bail when he appeared before magistra...
Gomwe denied bail, remanded to June 17 4 June 2015 HARARE - Godwin Gomwe, Zanu PF's Harare youth league chairperson, will further languish in remand prison after a magistrate denied him bail yesterday on charges of abusing First Lady Grace Mugabe's name in an alleged extortion racket. Gomwe is jointly charged with Muchineripi Mupindu, Hamphrey...